ရုရှားတော်လှန်ရေး crossword #1
ရုရှားတော်လှန်ရေး crossword #2
ရုရှားတော်လှန်ရေး crossword #3
ရုရှားတော်လှန်ရေး crossword #4
ရုရှားတော်လှန်ရေး crossword #5
ရုရှားတော်လှန်ရေး crossword #6
ရုရှားတော်လှန်ရေး crossword #7
ရုရှားတော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ဖြစ်ရပ်များ 1907-1916
ရုရှားတော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ဖြစ်ရပ်များ 1917
ရုရှားတော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ဖြစ်ရပ်များ 1918-1924
ရုရှားတော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - တော်လှန်ရေးသမား
ရုရှားတော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - tsarists
ရုရှားတော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ: သဘောတရားများကို (ငါ)
ရုရှားတော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ: သဘောတရားများ (II ကို)
ရုရှားတော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ: 1906 မှဖြစ်ရပ်များ 1913
ရုရှားတော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ: 1914 မှဖြစ်ရပ်များ 1916
ရုရှားတော်လှန်ရေးမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ: 1905 မှဖြစ်ရပ်များ
ရုရှားတော်လှန်ရေး wordsearch - အယူအဆများ
ရုရှားတော်လှန်ရေး wordsearch - လူတွေ
ရုရှားတော်လှန်ရေး wordsearch - သောနေရာများ
ရုရှားတော်လှန်ရေး မသာကိုရုရှား၏သင်တန်းကိုပြောင်းလဲတဲ့သဲအဖြစ်အပျက်ကြီးကလည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသည့် 20th ရာစု shaped ။
အဆိုပါ 20th ရာစုအလှည့်မှာ, ရုရှားနိုင်ငံ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အာဏာအရှိဆုံးအင်ပါယာ၏တစျခုဖွစျသညျ။ ၎င်း၏မြေဥရောပကနေအာရှကိုဆန့်နှင့်ကမ္ဘာလုံး၏တဆဋ္ဌသရုပ်ဆောင်။ ရုရှားကလူဦးရေရဲ့တိုင်းရင်းသားနှင့်ဘာသာစကားအုပ်စုများများစွာ spanning, 100 လူဦးရေသန်းထက်ကျော်လွန်။ စစ်တပ်ကရပ်နေသည်၎င်း၏စစ်အေးကာလကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
၎င်း၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်အာဏာရှိနေသော်လည်း, ရုရှားကခေတ်သစ်ခဲ့သကဲ့သို့အလယ်ခေတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုရှားအင်ပါယာရုံတယောက်သောသူကအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်, Tsar က Nicholas II ကို, အဘယ်သူသည်သူ၏နိုင်ငံရေးအခွင့်အာဏာယုံကြည်သည်ဘုရားသခင်ထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ 1905 ခုနှစ်, Tsar ရဲ့အာဏာရှင်တန်ခိုးတော်အားဖြင့်စိန်ခေါ်ခဲ့သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများနှင့်တော်လှန်ရေးသမား ခေတ်မီဒီမိုကရေစီရုရှားကကိုဖန်တီးရန်ရှာကြံ။ အဟောင်းကိုစစ်အစိုးရအသက်ရှင်ကျန်ရစ် 1905 ၏စိန်ခေါ်မှုများ - ဒါပေမယ့်လွှတ်သည့်စိတ်ကူးများနှင့်တပ်ဖွဲ့များပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိပေ။
ပထမကမ္ဘာစစ် ရုရှားတွင်တော်လှန်ရေးများအတွက်ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဥရောပ၏အခြားဟောင်းဘုရင်စနစ်လိုပဲ, ရုရှားစိတ်အားထက်သန်စွာနှင့်အကျိုးဆက်များများအတွက်အတွေးမပါဘဲစစ်သို့ထိုး။ 1917 အသုံးပြုပုံစစ်ပွဲ, သေဆုံးမှုသန်းပေါင်းများစွာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်ရုရှားရဲ့စီးပွားရေးကိုပြုန်းခြင်းနှင့် tsar နှင့်သူ၏စစ်အစိုးရကိုများအတွက်လူကြိုက်များထောက်ခံမှုလျော့။
က Nicholas တန်ခိုးမှဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ယာယီအစိုးရဖြင့်အစားထိုးခဲ့ - ဒါပေမဲ့ဒီသစ်ကိုစစ်အစိုးရကထိုကဲ့သို့စစ်ဆက်လက်ဖိအားများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်အတန်းအကြားမြင့်တက်အစွန်းရောက်အဖြစ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စိန်ခေါ်မှုများ, ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ အောက်တိုဘာလ 1917 အတွက်တစ်ဦးကစက္ကန့်တော်လှန်ရေး၏လက်၌ရုရှားနိုင်ငံထားရှိ Bolsheviks, အစွန်းရောက်ဆိုရှယ်လစ်ကဦးဆောင် ဗလာဒီမာလီနင်.
လီနင်နှင့် Bolsheviks ၏သီလ extolled မာ့က်စ် နှင့်ပြုပြင်အတန်းများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကတိပြုခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကထိုဂတိတော်များကိုဂုဏ်ပြုတဲ့နှင့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည်နည်း စစ်ပွဲ၏တွေပေါ်မှာကျော်လွှားနှင့်ခေတ်သစ်လောကသို့ရုရှားကဆွဲနေစဉ်အတွင်းလီနင်နှင့်သူ၏သစ်ကိုစစ်အစိုးရက, အလုပျသမားမြားအတှကျအခြေအနေများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုငျပါသလော
alpha သမိုင်းရဲ့ရုရှားတော်လှန်ရေးက်ဘ်ဆိုက် 1905 နှင့် 1924 အကြားရုရှားတွင်ဖြစ်ရပ်များကိုလေ့လာဘို့အပြည့်စုံဖတ်စာအုပ်အရည်အသွေးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသေးစိတျအပါအဝင် 400 ကွဲပြားခြားနားသောမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်ထက်ပိုမိုပါဝင်ပါတယ် ခေါင်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်, စာရွက်စာတမ်းများ နှင့် ဂရပ်ဖစ်ကိုယ်စားပြုမှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်မှာလည်းကဲ့သို့သောရည်ညွှန်းပစ္စည်းပါရှိသည် မြေပုံ နှင့် အယူအဆမြေပုံ, ဘာလဲဆိုတော့အချိန်, စာလုံးအဓိပ်ပါယျတစ်ဦး ''သူဖွင့်'နှင့်သတင်းအချက်အလက်များ သမိုင်း နှင့် သမိုင်းပညာရှင်။ ကျောင်းသားများလည်းအပါအဝင်, အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများတစ်အကွာအဝေးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသိပညာနှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းစမ်းသပ်နိုင်သည် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, crosswords နှင့် wordsearches။ မူလတန်းသတင်းရင်းမြစ်ဘေးဖယ်, အာလဖသမိုင်းမှာအားလုံးအကြောင်းအရာအရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိဆရာ, ဆရာမများ, စာရေးဆရာများနှင့်သမိုင်းပညာရှင်များကရေးသားထားသည်။
မူလတန်းသတင်းရင်းမြစ်၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှသောအကြောင်းအရာများကိုအာလဖသမိုင်း 2019 ©ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းအရာကိုအာလဖသမိုင်း၏ express ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကူးယူချိသို့မဟုတ်ပြန်လည်ဝေငှပေးသည်မည်မဟုတ်ပါ။ Alpha သမိုင်းရဲ့ website နှင့်အကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖတ်ရှုပါ သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ.
ဒါဟာရုရှားတော်လှန်ရေး site ကို 1891 နှင့် 1927 အကြားရုရှားတွင်ဖြစ်ရပ်များအပေါ်ဆောင်းပါးများ, သတင်းရင်းမြစ်နှင့်အမြင်များပါရှိသည်။ ဤ site အာလဖသမိုင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနဲ့ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 173,003 စာမျက်နှာများတွင် 276 စကားလုံးများကိုပါရှိသည်နှင့်သြဂုတ်လ 3rd 2019 အပေါ်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစာမျက်နှာသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။